बा’घको मु’खबाट छो’रीलाई खो,सेर उ,द्धार गर्न सफल‘ महान आमा । कसरी बचाईन त ? हेर्नुहोस् (भिडियो) – AB Sansar
December 25, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बा’घको मु’खबाट छो’रीलाई खो,सेर उ,द्धार गर्न सफल‘ महान आमा । कसरी बचाईन त ? हेर्नुहोस् (भिडियो)
काठमाडौं – तनहुँकी एक महिला चि’तुवाको आ,क्रम,णमा परेकी आफ्नी छोरीलाई खो,सेर उ,द्धार गर्न सफल भएकी छन्।क्लागण्डकी नगरपालिका ३, बनकेवाकी इन्दिरा न्यौपानेले घरमै खेलिरहेकी छोरीलाई आ, x क्र,मण गरी घि,सारेर ५० मिटर तल पुयाएको चितु,वासँग ल,डेर छोरीलाई ब,चाएकी हुन्।
येशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनको सम्झनामा विश्वभर ‘क्रिसमस डे’ मनाइँदैै